umbono Apple uye ebesoloko ukwenza i iPhone ukuba ngokupheleleyo screen. Enye immersive ngoko isixhobo ngokwalo ubalekela amava. Kwaye ekrelekrele ukuze ukwazi ukuphendula itephu, ilizwi lakho, nkqu nje. Ndikunye iPhone X, loo mbono ngoku yokwenene. Yithi hello ukuya kwixesha elizayo.
Previous: Laptop Lenovo - 330-15IKB 15.6 "Laptop - Intel Core i3 - 8GB Memory - 1TB Hard Drive - Platinum Grey
Next: iindawo Auto MotoMaster Automotive Iibhetri
3G Fi Hotspot esisiGxina mfono Wireless
= Yakhelwe-In Battery Smart Phone
Dual Sim Ikhadi Dual yokulinda Smart Phone
Dual Sim Dual Yima Xa Smart
Dual Sim GSM Zinzisa Phone Wireless
Factory silalele Mobile phone
GSM 850/900/1800/1900 Smart
GSM Cordless Range Long Phone
Hotspot olusigxina mfono Wireless
Mi olusigxina mfono Wireless
ivideo imidlalo yokuzonwabisa Sony - PlayStation 4 Co Pro ...
Digital camera Canon - video Ntw T6i DSL ...